Sawirro dheeri ah oo ku saabsan sida sanduuqa lacag-bixinta ee AirPods oo leh buuq la joojinayo uu noqon doono | Wararka IPhone
Waxaan ka hadlaynay dhowr toddobaad oo ku saabsan AirPods-ka soo socda ee Apple ay ku bilaabi karto suuqa si ay isugu daydo inay qanciso dhammaan adeegsadayaasha aan dalban oo keliya tayada codka sare ee AirPods, laakiin sidoo kale nidaamka joojinta buuqa firfircoon, sida horeyba ay u bixiyeen shirkado badan oo hadda wax soo saara.
Laakiin si loo bixiyo nidaamka joojinta dhawaaqa, nashqaddaha AirPods waa inay beddelaan oo ay qaataan nidaamka dhegta taas oo ku dheggan dhegta si firfircoon looga go'doomiyo deegaanka. Go'doominta noocan ah, nidaamka baajinta dhawaaqa ayaa lagu dari doonaa si aan u dhaqaajin karno una joojin karno iyadoo loo eegayo baahideena.
Waqtigan xaadirka ah waxaan aragnay dhowr sawir oo na tusaya naqshad gaar ah, oo aad uga duwan ApplePP-yada Apple, AirPods oo ku saleysan EarPods. Laakiin kaliya naqshadeynta ma kala duwanaan doonto laakiin sanduuqa loogu talagalay in lagu raro oo lagu kaydiyo ayaa waliba gebi ahaanba ka duwanaan doona
Maanta waxaan ku tusaynaa laba sawir oo cusub oo ah jiilka saddexaad ee sanduuqa AirPods, AirPods Pro sida dadka qaar ugu yeeraan. SlashLeaks, ayaa soo dhejisay labadan sawir, sidaa darteed waxay u badan tahay inay la mid yihiin sheyga ugu dambeeya.
Sida laga soo xigtay ilo ku jira silsiladda sahayda, Apple waxay qorsheyneysaa inay soo saarto badeecadan dhamaadka bisha Oktoobar. Haddii aan tixgelinno, in aan joogno 26-ka, waxaa jira maalmo aad u yar oo dhammaadka bisha ah, sidaa darteed bilaabitaanku wuxuu u eg yahay bilowga Nofeembar.
Sida laga soo xigtay isla ilaha saadka, tiknoolajiyada baajinta dhawaaqa Waxay la mid noqon doontaa taas oo hadda ku jirta Apple Beats Solo Pro qiimihiisuna wuxuu gaarayaa 260 doolar. Iyadoo la adeegsanayo iOS 13.2 sawirka ugu horeeya ayaa laga dusiyay waxa jiilkan seddexaad ee AirPods noqon doono, sawir aad ugu eg kii SlaksLeaks horey u daabacay sidoo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Sawirro dheeri ah oo ku saabsan sida sanduuqa lacag-bixinta ee AirPods oo leh qaylo-dhaan uu noqon doono